SomaliaReport: Markabka Dagaal Danisha oosii Daayey Iiraniyiin
Markabka Dagaal Danisha oosii Daayey Iiraniyiin
Is rasaasayn Markabka Dushiisa oo Dishay 4 B/badeed
Markabka nooca dagaalka ah oo ay leedahay dawladda Denmark, ESBERN SNARE iyo ciidamo si khaas ah u tababaran oo saarnaa ayaa waxay weerar ku qaadeen dooni nooca kaluumaysiga ahayd oo ay saarnaayeen kooxo B/badeed ahaa oo qafaal ku haystay markab nooca xamuulka ah. Hawlgalkaa ayaa waxaa lagu dilay afar ka tirsanayd kooxda b/badeedda ilaa toban kalena way k dhaawacmeen.
Sida ay sheegeen ilo-wareedyada badda ee Danishku, hawlgalkan ayaa dhacay khamiistii, 12kii bishii May ka dib markay kooxo b/badeed ahaa oo saranaa markab ay khafaasheen ku fureen rasaas markabka dagaal ee ESBERN SNARE oo isaguna rasaas jawaab celin ah la beegsaday kooxihii b/badeedda ahaa. Is rasaasayntaa ka dib ayey b/badeeddu qoryihii dhulka dhigeen isna dhiibeen. ciidamada badda ee Danishka ayaa ka dib helay 16 la hayste-yaal ahaa oo u dhashay dalka Iran oo ay haysteen 28 b/badeed. Intii ka dhimatay kooxda b/badeedda ayaa maydkoodii badda lagutuuray.
Markabkan dagaal ee ESBERN SNARE oo laga leeyahay dalka Denmark ayaa ah markabka ugu weyn ee dagaal ee ka hawlgali jiray gacanka carbeed, markabkan ayaa qayb ka ahaa dhacdooyin hore o ku aaddanaa bilihii janaayo 22keedii iyo febraayo 12keedii ee sanadkan. Markii hore markabkan, rakaabkii fuushanaa iyo ilaaliye-yaasha xeebaha Siishalis ayaa ku guuldaraystay inay markabka Beluga Nomination ka badbaadiyaan weerarka uga imanayey MV York oo markaa ay b/badeeddu isticmaalayeen. Markii xigay ayey ku guulaysteen inay soo furtaan markabkaa iyaga oo cirka u ridayey xabado digniin ah. Waxayna soo badbaadiyeen laba Yemeni ahayd sidookale b/badeeddii ayaa la wada qabqabtay.
Dhamaadkii bishii April ayuu markabka ESBERN SNARE rasaas ku furay markab afduubasho loo haystay halkaana waxaa ku dhintay ilaa lix b/badeed. Hawlgalkan ayaa sababay inay baxsadaan toban iiraani ah iyo afar Pakistani ah.
Dhacdooyinkan ayaa yimd in yar ka dib markii weeraro b/badeedda lagula beegsaday uu sababay inay ka caagaan xeebta Hobyo.